Waa sidee dareenka qofka hobbigiisu yahay Ciyaarta Shataranjiga?!! | Somchess.net
You are here : Somchess.net » wararka » Waa sidee dareenka qofka hobbigiisu yahay Ciyaarta Shataranjiga?!!
Ciyaarta Shataranjiga ama Daamada loo yaqaano, waa ciyaaraha kala duwan ee adduunka midda ugu deggan, waxaana ciyaartoyda Shataranjiga ay caan ku yihiin marka ay ciyaarayaan degenaan iyo in mid kastaba uu ka fekerayo halka uu ka weerari karo kooxda kale ee ka horjeeda.
Haddaba Shataranjiga ama Daamada oo dalka Soomaaliya si aad ah looga ciyaaro, ayaa waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga Md. Axmed Cabdi Xasan (Wataac) oo ka mid ah ruug cadaayada sida weyn u ciyaara Iskaakada, isagoo sheegay in marka uu ciyaarayo Daamada dareenkiisa oo dhan uu ku jiheysan yahay miiska korkiisa, sida aad ka aragtaan sawirka qormadaan.
Waxaa kale oo uu sheegay Guddoomiye Wataac in Xiriirkiisu guulo badan ka soo hooyay tartamo ka dhacay dalalka caalamka qaarkood gaar ahaan Afrika iyo Aasiya, taasi oo uu tilmaamay inay ku suurtagashay dadaalo fara badan oo uu sameeyay xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga waxaa kale oo uu tilmaamay in sidoo kale uu dadaallo ballaaran sidii loo casriyeyn lahaa ciyaarta Jeeska, isla markaasina ay ula jaan qaadi lahayd qaabka looga ciyaaro dalalka horay u maray.
“Dadaal dheer kaddib waxaan keenay Barnaamijyo loogu talagalay ciyaarta Jeska oo lagu ciyaarayo Computerka kaddib marka lagu shubo Borogaraam uu soo diyaariyay Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga” ayuu yiri Axmed Cabdi Xasan Wataac oo dhinaca kale sheegay in Borogaraamkan cusub ay ka faa’iideysteen bahda Jaska.
« Soomaaliya oo manhajka wax barashada iskuulada lagu soo darayo Shataranjiga
Xiriirka Shataranjiga Oo Ka Qeybgalaya AJCC 2009 »